मध्यराती देखि लागू हुने गरी आन्तरिक उडानमा हवाई भाडा बढ्यो ,कुन ठाँउको कति ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/मध्यराती देखि लागू हुने गरी आन्तरिक उडानमा हवाई भाडा बढ्यो ,कुन ठाँउको कति ?
काठमाडौं : सरकारले पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य बृद्धि गरेसँगै वायुसेवा सञ्चालकले हवाई भाडा पनि बढाएका छन्। आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी हवाइ भाडा बृद्धि गरिएको वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कँडेलले बताए। वायुसेवा सञ्चालकले बढाएको हवाइ भाडालाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ।
हवाइ इन्धनमा बढेको मूल्य अनुसार नै हवाइ भाडा पनि बढाइएको छ। जसअनुसार, काठमाडौंबाट धनगढीको भाडामा ८५ रुपैयाँ बढेको छ।
त्यस्तै, नेपालगन्जका लागि ६५ रुपैयाँ र भद्रपुरका लागि ६० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। काठमाडौंबाट सिमराका लागि १५ रुपैयाँ बढेको छ।
संघका काठमाडौंबाट पोखराको ३५ रुपैयाँ बढेको छ भने भैरहवाका लागि ४५ रुपैयाँ बढेको छ। त्यस्तै, विराटनगरका लागि ५० रुपैयाँ भाडा बढेको छ।यससँगै पर्वतीय उडानको भाडा पनि बढाइएको छ।पर्वतीय उडानको भाडा ६५ रुपैयाँ बढेको छ।
यो पनि, नेपाल लगानीका लागि सुगम गन्तव्य: अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक लगानीका लागि नेपाल सुगम गन्तव्यमा रुपमा स्थापित भएको बताउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालय आज आयोजित एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डसम्बन्धी जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले मुलुक शान्तिको मार्गमा अगाडि बढेकाले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्रीले गैरआवासीय नेपालीले नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रका लगानी गर्ने ध्येयका साथ रु १० अर्ब पुँजी भएको एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड लिमिटेडको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभयो । सो फण्डमा सरकारको पाँच प्रतिशत लगानी रहनेछ । उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिमा व्यवसायी उपेन्द्र महतो अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
कुवेतमा ज्यान गुमाएका चार नेपालीको शव कतार हुँदै नेपाल ल्याईदै
लगातार बढिरहेको सुनको मुल्य आज अचानक ह्वात्तै घट्यो